Andraikitra 12 isaky ny herinandro fiasan'ny Marketer Media | Martech Zone
Alahady, Desambra 6, 2015 Alahady, Desambra 6, 2015 Douglas Karr
Minitra vitsy isan'andro? Ora roa isan-kerinandro? Misy dikany. Ny haino aman-jery sosialy dia mitaky ezaka mitohy tsy tapaka ho an'ireo orinasa hahatsapa tanteraka ny fahafahan'ny medium hampitombo ny mpihaino sy hanangana fiaraha-monina. Topazo maso ny Lisitry ny lisitra haino aman-jery sosialy izay navoakanay teo aloha ary ho hitanao fa mitaky ezaka, fisafidianana fitaovana ary fampiasam-potoana.
Ity infographic ity dia raisiko amin'ny fotoana ilaina amin'ny fampanjariam-bola amin'ny asa sosialy mahomby. Fampandrenesana lehibe - mazava ho azy, ny fikambanana tsirairay dia tsy mitovy ary ny fikorontanan'ny asa izay natao sy nampiharina dia mila miasa mankany amin'ny fanatrarana ny tanjon'ny orinasa. Raha lazaina izany dia tsapako fa ny habetsaky ny fotoana voatondro eto dia tena zava-misy lavitra noho ny fiheverana fa afaka mahazo lanja avy amin'ny fantsona sosialy ny fikambanana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola "15 minitra isan'andro". Mark Smiciklas, Consulting amin'ny intersection
Ora fiezahana isan-kerinandro ho an'ny drafitra media sosialy mahomby
fitorahana bilaogy - ora 7.5 hamokarana atiny azonao zaraina amin'ny alàlan'ny media sosialy.
ho foana - ora 5 hamahana olana, manoratra lahatsoratra tsy voalamina, mikaroka ary manome fifehezana fahasimbana hitantanana laza.
Updates - 4 ora handefasana lahatsoratra, sary ary hevitra.
Engagement - adiny 4 isan-kerinandro hamaliana ireto manaraka, voalaza ary fanontaniana ireto.
Research - Adiny 3 hanomezana atiny anatiny sy ivelany.
mihaino - 2.5 ora fanaraha-maso ny marika voalaza, tenifototra, teny lakile ary karoka.
Curation - 2.5 ora famakiana fahana, sivana ary fizarana atiny.
Community - 2.5 ora ny fanentanana sy fahazoana mpihaino.
fampielezan-kevitra - Ora 2.5 hamoronana fifaninanana sy hitantanana fampiharana fampiroboroboana.
Strategy - 2.5 ora amin'ny drafitra sy ideika taktika.
Analytics - Adiny 2.5 handinihana ny tatitra momba ny haino aman-jery sosialy sy ny fahombiazany.
Planning - Adiny iray isan-kerinandro hanavaozana ny tetiandro famoahana sy hanomezana andraikitra.
Ity ny infographic mahafinaritra an'i Marka izay manaparitaka ireo lahasa 12 ireo ho isan'ny ora hitany fa mandany ny orinasa hahatanteraka azy.
Tags: fitorahana bilaogySary torohayconsultation intersectionMark Smiciklasfitantanana lazafanadihadiana amin'ny media sosialyfampielezana haino aman-jery sosialytranokalan'ny media sosialyfitsaboana amin'ny media sosialyfifandraisan'ny media sosialyora media sosialysary amin'ny haino aman-jery sosialyfihainoana ny media sosialyfanaraha-maso ny media sosialyny drafitry ny media sosialyfikarohana amin'ny haino aman-jery sosialyfandaharam-potoana media sosialyTetikasan'ny media sosialyherinandro fiasan'ny media sosialy
Dec 10, 2015 ao amin'ny 12: PM PM
Douglas, misaotra tamin'ny fizarana ny sary tao amin'ny lahatsoranao - ankasitrahana indrindra!